बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउनुपर्छ : सांसद यादव – onlinedarpan:
Posted on January 1, 2019 January 1, 2019 Author onlinedarpanComment(0) 154 Views
काठमाडौँ – सांसद प्रदीप यादवले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानून बनाउन संसद्को ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको शून्य समयको बैठकमा सांसद यादवले पर्सा जिल्लाका देवकुमार पटेलले सोही जिल्लाका पाँच वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेकाले निजलाई मृत्युदण्ड हुनुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी, सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पानी जहाजका विषयमा संसद्लाई जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन् । “प्रधानमन्त्रीले २०७५ साल पुस १६ बाट नेपालमा पानी जहाज सञ्चालन हुन्छ भन्नुभएको थियो, तर पानी जहाज सञ्चालनमा आएन । त्यसैले उहाँबाट संसद्लाई जवाफ दिनुपर्छ”, उनले भने ।
Share7 Tweet Google+ Pin0 7shares बुटवल । बुटवलस्थित शिवनगर जंगलमा १६ वर्षीया किशोरी सामुहिक बलात्कारको शिकार भएकी छन् । देवदह नगरपालिका वडा नं. १० स्थित चरंगेमा मंगलबार बेलुका ८ बजेको समयमा बलात्कार भएको हो । बलात्कारको आरोपमा २ जना पक्राउ परेका छन् ।पीडित किशोरीको जाहेरीको आधारमा देवदह नगरपालिका–१० का ३५ वर्षीय उदय थापा र बुटवल विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
Share0 Tweet Google+ Pin0 0shares विराटनगर। एक नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा मिस प्रदेश 2018 विजयी रमिला बस्नेतलाई सम्मान गरिएको छ । प्रदेश नम्बर एकको माननीय सांसद तथा उपसभामुख सरस्वती पाेख्रेलले मिस स्टेट तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी बस्नेतलाई सम्मानित गरिएको हो । सगरमाथा पार्टीप्यालेशमा प्रथम रास्ट्रिय बेटी सम्मेलन आन्तरगत महिला अंकित स्तम्भ निर्माण) गर्न प्रदेश न. १ विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
Share12 Tweet Google+ Pin0 12shares उदयपुर । कटारी नगरपालिका– ८ स्थित गल्टारको सौर्य सिमेन्ट उद्योगको चुनढुङ्गा खानीको एउटा ट्याङ्करमा आगलागी हुँदा तीन करोड मूल्य बराबरको क्षति भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका प्रहरी उपरीक्षक चन्द्रदेव राईका अनुसार गए राति ११ बजेतिर अचानक एक ट्याङ्करमा आगलागी हुँदा तेलसमेत जलेको र एक स्काभेटरसमेत जलेर नष्ट भएको विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…